ကိုဗစ်ဖြစ်နေသော မိဘနှစ်ပါးအား စိတ်ပူနေသော်လည်း ပြန်လာလို့မရတာကြောင့် ဝမ်းနည်းစိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ မော်လ်ဒယ် သူဇာဝင့်လွင် – Daily News
ကိုဗစ်ဖြစ်နေသော မိဘနှစ်ပါးအား စိတ်ပူနေသော်လည်း ပြန်လာလို့မရတာကြောင့် ဝမ်းနည်းစိတ်ထိခိုက်နေတဲ့ မော်လ်ဒယ် သူဇာဝင့်လွင်
ပရိသတ်ကြီးရေ မော်ဒယ်သူဇာဝင့်လွင်ဟာ Miss Universe သွားပြိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလို့ မရတော့တာကြောင့် ပြည်ပမှာပဲ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ကိုင်နေပါပြီနော်။ မိဝေးဖဝေး နေထိုင်ရတာကြောင့် အိမ်ကိုလွမ်းနေကြောင်းကိုလည်း အမြဲတမ်း တင်လေ့ရှိပါတယ်နော်။
ဒီနေ့မှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွိတဲ့ မိဘနှစ်ပါးလုံး ကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့အတွက် အတော်လေးကို စိတ်သောကရောက်နေရပါတယ်နော်။ မိဘတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်ဆီဂျင် concentrator အမြန်လိုနေတာကိုလည်း post တင်ထားပါတယ်နော်။
အဖေနဲ့အမေ covid positive ဖြစ်နေတာတောင် အဝေးကနေပဲဖုန်းဆက်ပီးဂရုစိုက်ပေးလို့ရတဲ့ဘဝဖြစ်နေတယ်😞
အမေကရောဂါအခံဆီးချိုသွေးတိုးရှိတော့ဘယ်လိုပိုဂရုစိုက်ပေးရမလဲဟင်? သိတဲ့သူတွေပြောပြပေးပါနော် 🙏 လို့ ရေးသားထားပါတယ်နော်။ ပရိသတ်တွေလည်း သူဇာဝင့်လွင်ရဲ့ မိဘနှစ်ပါးစလုံး အမြန်နေကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးကြပါဦးနော်။
ကိုဗဈဖွဈနသေော မိဘနှဈပါးအား စိတျပူနသေျောလညျး ပွနျလာလို့မရတာကွောငျ့ ဝမျးနညျးစိတျထိခိုကျနတေဲ့ မျောလျဒယျ သူဇာဝငျ့လှငျ
ပရိသတျကွီးရေ မျောဒယျသူဇာဝငျ့လှငျဟာ Miss Universe သှားပွိုငျပွီး မွနျမာနိုငျငံကို ပွနျလာလို့ မရတော့တာကွောငျ့ ပွညျပမှာပဲ အနုပညာအလုပျတှေ လုပျကိုငျနပေါပွီနျော။ မိဝေးဖဝေး နထေိုငျရတာကွောငျ့ အိမျကိုလှမျးနကွေောငျးကိုလညျး အမွဲတမျး တငျလရှေိ့ပါတယျနျော။
ဒီနမှေ့ာလညျး မွနျမာနိုငျငံမှာ ရှိတဲ့ မိဘနှဈပါးလုံး ကိုဗဈရောဂါခံစားနရေတဲ့အတှကျ အတျောလေးကို စိတျသောကရောကျနရေပါတယျနျော။ မိဘတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့ အောကျဆီဂငျြ concentrator အမွနျလိုနတောကိုလညျး post တငျထားပါတယျနျော။
အဖနေဲ့အမေ covid positive ဖွဈနတောတောငျ အဝေးကနပေဲဖုနျးဆကျပီးဂရုစိုကျပေးလို့ရတဲ့ဘဝဖွဈနတေယျ😞
အမကေရောဂါအခံဆီးခြိုသှေးတိုးရှိတော့ဘယျလိုပိုဂရုစိုကျပေးရမလဲဟငျ? သိတဲ့သူတှပွေောပွပေးပါနျော 🙏 လို့ ရေးသားထားပါတယျနျော။ ပရိသတျတှလေညျး သူဇာဝငျ့လှငျရဲ့ မိဘနှဈပါးစလုံး အမွနျနကေောငျးပါစလေို့ဆုတောငျးပေးကွပါဦးနျော။
၂၃ ဒေါ်လာနဲ့ ဝယ္လာတဲ့ အထည်ရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာ ဒေါ်လာ မြောက်များစွာ ပါလာခဲ့လို့ ထီပေါက်သလိုဖြစ်သွားတဲ့ အမျိုးသားရဲ့အဖြစ်
ရည်းစားမရှိပါက တွင်းထဲကရေ ၇ ခွက်သောက်ခြင်းဖြင့် ချစ်သူရည်းစားရသွားစေမည့် အံ့အားသင့်ဖွယ် ရေတွင်းကြီး
အားလုံးပြီးဆုံးသွားတဲ့ ခေတ်ကို ရောက်ရင် CDM...